FAMOAHANA LAZA ADINA BAKALOREA : Tafakatra 59 ireo nosamborina sy nohadihadiana
Tafiakatra 59 hatreto ireo nosamborina mahakasika ny fanaparitahana laza adina bakalorea mialoha ny fotoana. 15 octobre 2019
Olona 16 hafa indray mantsy no voasambotry ny mpitandro filaminana sy nanaovana fanadihadiana nanampy ireo efa nosamborina teo aloha. Ny 19 tamin’izy ireo moa dia notanana am-ponja vonjimaika avy hatrany ary ny 7 kosa arahin’ny Fitsarana maso akaiky ny momba azy.
Araka ny fanazavana, mpampianatra sy mpikirakira solosaina notendren’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony tamin’ny fanomanana ny laza adina ireto nanaovana fanadihadiana sy nalaina am-bavany farany ireto. Nanazava ny kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa “tsy mbola tena fantatra mazava hatreto izay tena tanjon’ireo namoaka ny laza adina na tena fiketrehana fanakorontanana tokoa na fitia te hahazo naoty ambony mandritra ny fanadinana fotsiny ihany”. Voarohirohy ao anatin’ity raharaha ity koa ny mpandrindra ny fanadinana bakalorea ankapobeny raha ny fanazavana voaray hatrany.